धर्म र रेखा थापा को पहिरन
Aakar April 13, 2010
भर्खरै रिलिज भएको ‘हिफाजत’ नामको फिल्ममा नायिका रेखा थापाले लगाएको पहिरनले हिन्दू धर्मको अपमान भयो भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रशासनले फिल्म देखाउनै रोक लगाइदिएको रहेछ । कुरा सुन्दा सामान्य झैँ लागेपनि, निहुँ खोज्नेहरु का लागि यो कुरा पहाड भएको रहेछ । रामनामी कपडा ले संवेदनशिल अंग छोपेर, हिन्दु धर्मको अपहेलना गरिएको भन्ने आरोप, विश्व हिन्दु महासंघ ले लगाएको रहेछ ।
हुन त रेखा थापा को पहिरन विवाद उठिरहन्छ, कसैले के भन्छन् कसैले के भन्छन् । अनि यहाँ अहिले उठेको सवाल अंग प्रदर्शन को पनि होइन, मात्र लगाइएको पहिरनलाई लिएर उठाइएको बखेडा हो । रामनामी कपडा महिलाहरु को संवदेनशिल अंगहरु मा प्रयोग गरि, हिन्दु धर्म माथि प्रहार गरियो भन्दै, विवाद चर्काइएको रहेछ ।
संविधान सभा जस्तो संवेदनशिल कुरालाई छाडेर माओवादीले एमआरपी र सरकार परिवर्न को विषय मा नेपाल बन्द गर्ने गरेको प्रयास जस्तै हो भन्दा फरक नपर्ला यो कुरालाई !
यस्ता कुरा मा बहस गर्नु व्यर्थ जस्तो लाग्छ मलाई, लगाउने पहिरन ले केही गर्दैन । यसको सकरात्मक पाटो हेर्ने भए राम्रै छ नि, 'हरे राम, हरे कृष्ण लेखेको लुगा ले महिला को संवेदनशिल अंग को बचावट गरेको छ', 'जुन संवेदनशिल छ, त्यो अंगलाई झन् रामनामी कपडा ले छोप्दा के बिग्र्यो ?, अब भगवान नै छन् भने झन् राम्रो भयो, उनले सबैलाई हिफाजत र सुरक्षा दिइरहेकाछन्' । अब निहुँ नै खोज्ने हो भने त जे भने नि भइहाल्छ ! दृष्टान्त दिन सकिन्छ, ‘बाहिर का कट्टर मुस्लिम समुदायहरु को, जो अल्लाह र धर्म को लागि जे पनि गर्छन्’ ।
यस्ता कुरा मा निहुँ खोज्ने, प्रदर्शन नै रोक्नु त मुर्ख्याई मात्र हो, उक्त चलचित्र मा हिन्दु धर्म को अपमान गर्नलाई उनीहरु ले पक्कै पनि, त्यसो गरेका थिएनन् होला । उनीहरु ले गर्दै जाँदा र भन्दै जाँदा गित सुहाउँदो पहिरन मात्र राखेका होलान् । हिन्दु धर्म कै अपमान गर्न को लागि भनेर, जानाजान यसो गरिएको भने त बेग्लै कुरा हो, कारण करौँडो को आस्था छ हिन्दु धर्म मा तर त्यसो पनि होइन होला ।
यस्ता कुरालाई तन्काउने भन्दा पनि सल्ट्याउन जरुरी छ । यदि भगवान छन् भने, उनी रिसाउँदैनन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ, पुज्दा खुशि हुने र नपुज्दा दु:खी भएर नराम्रो गर्छन् भने त तीनी भगवान नै भएनन्, दानव भइहाले नि, हैन र ? अनि कहिँ कतै भगवान छन् भने त उनले सबैको भलो नै गरिदिन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ, चाहे उनलाई पुज वा नपुज, उनलाई मान या नमान ! चाहे उनको भजन गाउ या नगाउ ! उनी छन् भने, उनले घुस लिँदैनन्, अत: उनी सबैलाई समान व्यवहार गर्छन्, सबैको भलो नै गर्छन् । यसले चाँहि मेरो भजन गाएन, खुबै ठूलो बन्यो, यसलाई त राम्रो हुँदै नहोस् भनेर कुनै भगवान ले भन्लान त ? त्यो, इर्ष्या गर्ने त दानविय व्यवहार भइहाल्यो नि, अत: यस्तो सानो तिल जस्तो कुरा लाई पहाड बनाउनुलाई कुनै पनि हालत मा न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।
मैले बुझ्न सकिन, कुन हिसाब ले हिन्दु धर्मलाई प्रहार गरेको छ, यो पहिरन ले ? सारा शरीर ढाक्न त्यही कपडा ले हुने, थोरै शरीर ढाक्न चाँहि नहुने भन्ने केही छ र ? विश्व हिन्दु महासंघलाई यो पहिरन का कारण हिन्दु धर्म को अपमान भएको लाग्छ भने,विभिन्न समय मा पशुपति मा आउने नागा बाबाहरु ले हाम्रो हिन्दु धर्मलाई कति गिज्याएको होला भन्ने केही हेक्का छ त ?
तर सायद, औसत मात्र व्यापार गर्ने, नेपाली चलचित्रहरु को पब्लिसिटि स्टन्ट हुन पनि सक्छ यो, भित्र को कुरा के थाहा हैन र ?
तर पहिरन कै कारण, चलचित्र प्रदर्शन मा रोक लगाएको भन्ने सुन्दा चाँहि हाँसो उठेको छ, यी धर्म का नाम मा राजनिति गर्नेहरु देखेर । म हिन्दु हुँ, मलाई यो पहिरन ले केही पनि फरक पारेकै छैन । अहिले को युग सुहाउँदो कुरा भन्ने हो भने, नयाँ फेसन, नयाँ प्रयोग भन्दा फरक पर्दैन यसलाई । अनि यही फोटो हेर्ने हो भने, रेखा थापा को पहिरन देखेर जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । रामनामी पहिरन सबैले लगाएकै छन्, ओढेकै छन्, रेखा थापा नै रामानामी कपडा मा नाच्ने पहिलो पनि हैन क्या रे त !
काम नभएपछि, मान्छेहरु निहुँ खोज्छन् भन्थे सायद यही नै भएको होला ।
Sweta April 13, 2010 at 8:07 AM
Timi le bhaneko kura pani thik lagyo....
Sano kura lai teel lai pahad banaune chalan yeha cha...and thulo kura lai chai bewasta garne...
Film lai nai roknu bhaneko ....ta nararmo lagyo...yeuta samuha le matra testo garnu...I felt like India...tya sano kura lai kasto kasto banayera...media le highlight garera....k k garchan ni....
At first I thought ...kasto naramro lako...but they have the freedom...I felt after reading your post (:
Anonymous April 13, 2010 at 9:22 AM
रेखा थापा पनि कुनै हेरोनी हो र यो त निर्लज्ज र बिबेक शुन्य आइमाई हो । जसलाई हिन्दु धर्मको नीति त आर्थ के थाहा । हुन त बिचरीलाई नीति र सिदान्त थाहा हुनलाई ती कुरा भएका पुस्तक पढ्न पनि त आउनु परो ।
डीआर न्यौपाने'सूर्य' April 13, 2010 at 3:41 PM
आकार जी ले पोखेको बिचार ठिकै लाग्यो । मलाई लाग्छ यसमा पनि कुनै राजनीतिक स्वार्थको आड छ जो पहिरनको कुरालाई जोडेर कुनै स्वार्थ पुरा गर्न खोज्दैछ ।
Anurag From Dhulikhel April 13, 2010 at 3:57 PM
'हरे राम, हरे कृष्ण लेखेको लुगा ले महिला को संवेदनशिल अंग को बचावट गरेको छ', 'जुन संवेदनशिल छ, त्यो अंगलाई झन् रामनामी कपडा ले छोप्दा के बिग्र्यो ?.............आकारब्रो यो words त झन आगोमा घिउ थप्ने हो कि अलिक बैज्ञानीक टिप्पणी गर्नु पर्ने ठाउँमा के भनेको एस्तो ???? लौ भएन है । think again!!
Basanta April 13, 2010 at 7:36 PM
ती हिन्दू धर्मका लाउकेहरु पटमुर्ख हुन्। रेखा थापाले रामनामीले के जाती छोप्दैमा हिन्दू धर्म सिध्दिन्छ? अर्थ न बर्थको बहस ग-यो, भात पचायो। लुगाको कामै जीऊ छोप्ने हो, अब लुगामा जे लेखेको पनि हुनसक्छ।
Aakar April 13, 2010 at 11:38 PM
अनुराग ब्रो यो कुरा झिकेर निहुँ खोज्ने ले अरु कुरा बुझ्दैनन्, के गर्नु त ? :P
Jotare Dhaiba April 14, 2010 at 12:16 AM
धार्मिक पहिरनको विषयलाई लिएर फिल्ममै रोक लगाउँदा फिल्मकर्मीको कार्यक्षेत्रमा अर्को 'अवहेलना' हुन जाला । निषेधको खेल देवताले गर्छ भने पनि त्यो दानवीयतामा दरिन्छ । तर के कुरा गर्दा के हुन्छ, आफू के गर्दैछु, कतिसम्मको सीमा ठीक हो भन्नेमा स्वविवकले ठम्याउनुपर्छ हामीले । लहडमा जे पायो त्यही गर्न मिल्दैन । फेसनको चमकदमक दुनियाँ मनमानी लोक हो भन्ठान्नु भुल हुन जान्छ, यसलाई अनुमोदन गरी 'प्रयोग', 'समावेशी', 'आधुनिक' को बिल्ला भिराउँदै लाहाछाप लगाउने पक्षमा हुनु चाहिँ उदारता हो भन्ने पनि लाग्दैन ।
बेतुकको नेपाली फिल्म (अधिकांश) मा बेतुकको नौटङ्की देखाउनुको के जरुरत ?
Dilip Acharya April 14, 2010 at 8:29 AM
मलाई भने यो केवल एउटा'स्क्यान्डल' गरेर फ्लिमको नि:शुल्क प्रचारबाजी गर्ने एउटा उपाए गरेको जस्तो लाग्यो !
Jotare Dhaiba November 12, 2010 at 4:08 AM
Anurag From Dhulikhel November 12, 2010 at 4:08 AM
ashish August 1, 2012 at 11:47 AM
sachai luga ko nam ma k lagayako tyo tyasto ram nami ta maile puran bata lyae ko thie ma pura nai dinthe kina ada lako hola hai